Maso Arabo: Bilaogera Ejypsiana Mpirahalahy Miozolomana Tsy Hita (10 Taona Lasa Izay) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2017 7:01 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny Jolay 2007 ity adika eto ity)
Tsy hita ilay bilaogera Ejypsiana Ahmed Saad Domah, araka ny filazan'ny Mpanaramaso (Observatory) ny bilaogera, izay napetraka hanaramaso ny fisamborana sy ny herisetra mihatra amin'ireo bilaogera sy mpanoratra amin'ny aterineto ao amin'ny Tontolo Arabo.
Nandefa ity mailaka manaraka ity avy amin'ny loharano tsy fatam-piaviana ny tranonkala, nilaza ny mailaka fa nosamborina noho ny fanapariahana fanentanana fanangonan-tsonia an-tapitrisany mba hanoherana ny fitondran'ny Filoha Ejypsiana Hosni Mubarak i Domah. Matetika mampiasa ny teny “tsy hita’ ho solon'ny ‘nalain'ny manampahefana an-keriny’ ny bilaogera rehefa manoratra momba ny fisamborana.
Tahaka izao manaraka izao ny mailaka nalefa tao amin'ny Observatory:
Naharay izao hafatra manaraka izao ny Mpanaramaso ny Bilaogera: nalaina an-keriny tao akaikin'ny trano fonenany ao amin'ny Lalana 25, sampan'ny Lalana 50, akaikin'ny Fianarana, ao Shubra Al Khayma ilay bilaogera Mpirahalahy Miozolomana sady poeta Ahmed Saad Domah, izay mitantana bilaogy Tononkalo Mpirahalahy. Nilaza ny loharanom-baovao akaiky azy fa gaga izy nahita lehilahy telo nanafika an'i Ahmed Saad, izay notoheriny. Notampenan'izy ireo avy eo ny masony ary nentiny tao anatin'ny fiarakaretsaka Chevrolet manga izy, izay nijanona tao amin'ny sisin-dalana ao amin'ny Lalana 25. Nisy fiara fitateram-bahoaka fotsy nijanona teo akaikin'ny fiara. Nafindran'izy ireo tao anatin'ilay fiara iombonana avy eo izy, izay nitondra azy tany amin'ny toerana tsy fantatra. Nitranga teo amin'ny 10:30 ora maraina na tamin'ny 11 maraina teo tamin'ny Alakamisy 26 Jolay izany.
Nilaza ny naman'i Ahmed Saad fa niezaka nanakana azy tsy havitrika amin'ny fanentanana izy satria nanomana fanentanana fanangonan-tsonia an-tapitrasany hanoherana ny fitondrana Moubarak i Ahmed. Manantena aho fa hihetsika sy hanohana an'i Ahmed Saad ny rehetra amin'ny fametrahana sora-baventy sy fifandraisana amin'ny mpisolo vava. Hamaly soa anao anie Allah amin'ny asa tsara ataonao.
Ity ny mailaka voarainay. Tsara ny manamarika fa mpikambana ao amin'ny “Mpanaramaso ny Bilaogera” i Ahmed Saad. Tsy fantatra ny loharano niavian'ity vaovao ity. Mbola miandry fanamafisam-baovao sy vaovao fanampiny momba ity olana ity avy amin'ireo mpikambana sy mpamaky izay mahafantatra ny zava-nitranga ny Observatory.
Naneho hevitrta tamin'ny lahatsoratra, bilaogera Meedo nanoratra hoe:
Tantara marina ity ary notaterina tamin'ny bilaogy sy sehatra fiadian-kevitra rehetra amin'ny aterineto. Hatramin'izao, tsy misy mahafantatra ny misy an'i Ahmed. Nalaina an-keriny teny an-dalana izy ary mbola tsy navotsotra.